१२. स्टिभ जब्स र संगत - Harish Bk
Home/ Article/१२. स्टिभ जब्स र संगत
हामीले कोसँग संगत गर्नुपर्छ ? तथागत गौतम बुद्धलाई कसैले सोधेका थिए ।जागृत पुरुषसँग मात्र संगत गर्नुपर्दछ किनभने जोसित संगत गरिन्छ तिमी त्यस्तै बन्नेछौ । यदि त्यस्ता कोही पनि भेट्टाइएन भने‘जंगलमा हिँड्ने गैँडा जस्तै एक्लै हिँड तर गलत वा कमजोर मान्छेसँग संगत नगर । अन्यथा कालान्तरमा तिमी पनि गतल वाकमजोर बन्नेछौ ।’
अब स्टिभ जब्सकै कुरा कोट्याऔँ । यिनले रिड कलेज पढ्दापढ्दै बीचमै पढाइ छोडिदिए । उनले यान्त्रिकपारामा पढाइनेशिक्षण प्रणालीमा आफ्नो भविष्य बनाउने कुरा भेटेनन् । संयोगवश उनले जागिर खोज्ने क्रममा अटारी कम्पनीका संस्थापकनोलन बुसनेलको संगत पाउँछन् । यो व्यक्ति रियालिटी डिस्टोर्सन फिल्ड प्रयोग गर्ने थोरै विज्ञमध्ये एक थिए । यसो भनेकोवास्तविकता बंग्याउन सक्ने क्षेत्रको आवधारणा हो । अर्थात् कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन । अर्थात् आफूले चाहना र प्रयाशजारी राख्नुपर्दछ । जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने विज्ञान सम्मत धारणाको नाम नै रियालीटी डिस्टोर्सन फिल्ड हो । अतः बुसनेल‘नाइ, हँुदैन, सकिएला र ?’ जस्तो शब्द प्रयोग त के सुन्नै चाहँदैनथे । र त जब्सले बुसनेलको संगतमा आएपछि सिकेकोपहिलो पाठ नै यो थियो कि आफूले चाहेमा यथार्थलाई पनि तोडमोड गर्न सक्दो रहेछ । यस अवधारणाको विकासले उनकोमनमा क्रान्ति नै ल्याइदियो । उनी आफूले पनि असम्भव देखिने कुरा सम्भव बनाउने ताकमा रहन थाले । यसैबेला उनले अटारी कम्पनीका एकजना साथी बनाउन भ्याए– रोनवेन । रोनले यस कम्पनीमा जागिर खानअघि आफ्नै कम्पनीचलाइसकेको थिए तर उनी सफल भने भएनन् । तर, जब्सले उनको संगतबाट के सिके भने एकै व्यक्तिले पनि कम्पनीचलाउन सक्दोरहेछ । जब्सले त्यहाँदेखि सपना बुने– आफ्नैै निजी कम्पनी बनाउने । यसैबीच उनले अर्काे एकजना आफूजस्तैसाथी भेटे– स्टिभ बजन्याक जब्स । उनको बारेमा उनी भन्छन्, ‘आज म जे छु त्यो स्टिभ बजन्याककै कारण छु । यिनैसाथीसित मिलेर आफ्नै कम्पनी खोल्न अघि सरे । स्मरण रहोस्, भविष्यमा अर्बाैं डरलको हुने एप्पल कम्पनीको सुरुवातस्टिभले आफ्नो गाडी ७५० डलरमा बेचेर बजन्याकले ५०० डलरजति जुराएर गरेका थिए । त्यसबेलासम्म त कम्प्युटर भनेकोसर्वसाधारणको पहुँचबाहिरको कुरा थियो । त्यो सेनाका उच्च अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तुका रूपमा
लिइन्थ्यो । स्टिभहरूको चाहना के थियो भने ‘घर–घरमा प्रयोग हुने चिटिक्क परेको तर सस्तो कम्प्युटर निर्माण गर्नु । जुनकुरा त्यसबेला साथीहरूलाई सुनाउँदा उनीहरू गलल हाँसेका थिए । किनभने त्यसबेलासम्म यस्तो कम्प्युटर बन्नु असम्भवप्रायः थियो । तर उनीहरू १९७५ जुन २९ मा सबैभन्दा सस्तो ५०० डलरवाला एप्पल वन कम्प्युटर बनाएर विश्व विख्यात भए ।अतः संगतले स्टिभलाई वास्तविकता बंग्याउन माहिर बनाइदियो । अतः कि त एक्लै हिँड्नुपर्छ, कि त जब्सले पाएजस्तो संगतखोज्नुपर्दछ ।